PeaZip 3.7. Iyo yakanakisa yemahara compressor yeLinux | Linux Vakapindwa muropa
PeaZip ndeimwe ye mahara compressors zvakazara zvakakwana zve Linux. Ichi chirongwa che Free Software inotsigira mafomati anozivikanwa se: GZip, Tar, Zip, 7z, BZip2. Pamusoro pekumanikidza uye kudzikisira kwemafomati ataurwa pamusoro, PeaZip ine nzira yekunyorera iyo ine yakasarudzika fomati yechirongwa, chirevo chayo PEA zvinoreva ne kumanikidza, kuwanda-vhoriyamu, yakasimbiswa inoshandisika kunyorera uye kuvimbika masystem masisitimu , kureva Rongedza, Encrypt, Authenticate Archive Manager ane mabasa akaomeswa muchirongwa mafomu ake ega ekunzwisisa.
Chirongwa ichi chakanyanya kunyorwa mu Pascal uye inotsigira Linux y WindowsIyo zvakare ine gumi mafomati ekumanikidza uye angangoita zana mafomati eku decompress. PeaZip inogona kunyatsobatanidzwa nebrowser uye inosanganisa yekutsvaga mubatsiri uye inoshandisa mashoma masisitimu zviwanikwa, kunyangwe kushanda kwayo pakuona kwekutanga kunogona kunge kusinganzwisisike zvakanyanya kana ichienzaniswa nedzimwe nzira dziri nyore uye dziri nyore kushandisa.
Kunge mamwe ma compressors, PeaZip iyo zvakare inosanganisira mukana wekujoinha kana kutsemura mafaera pakati payo makuru mabasa, pamusoro pekutsvagisa diski uchitsvaga mafaera kana kugadzira wega-unoburitsa matura.
Chirongwa ichi chine mitauro yakawanda uye chinosanganisira mitauro yakati wandei, kusanganisira chiSpanish. Iyo yekuisa wizard ye PeaZip Iri muchiRungu uye haipe rubatsiro kune mimwe mitauro.
Kubva kune inoenderana yekumisikidza hwindo, inopa mukana wekusarudza mutauro wechiSpanish uye nekugona kuushandura gare gare mune sarudzo dzekumisikidza. Iyo yekumisikidza wizard iri nyore kwazvo uye inonzwisisika, saka kunyangwe iko kwekutanga kumisikidzwa kweChirungu semutauro wekutanga, inonzwisisika uye iri nyore kushandisa, kuitira kuti kumisikidzwa kuitwe munguva pfupi pasina kunetsekana. Kuti utore kurodha pasi chirongwa, ingosarudza iyo vhezheni inoenderana yekushandisa kubva pane iyi link iratidzwa pazasi.
Batanidzo | http://www.peazip.org
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » PeaZip 3.7. Iyo yakanakisa yemahara compressor yeLinux
Inonzwika inonakidza, ini ndichaedza iyo: D